पुस सिस्टम - कसरी मांसपेशीमा निर्माण गर्न?
अब मान्छे, ज्यादातर पुरुषहरु को धेरै आकार मा राख्न प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। कसैले अरूलाई घरमा गर्न चाहनुहुन्छ गर्दा अरूले स्टेडियम वरिपरि चलाउन र तेर्सो मा अभ्यास, जबकि, खेलकुद र जिमहरू दौरा। यो घर अभ्यास pushups प्रेमीहरूलाई अनुरूप हुनेछ। पहिलो, पुस प्रविधी हुनत यो विभिन्न विकल्प छ, एकदम सरल छ, र दोश्रो, प्रयोगले लगभग सबै प्रमुख मांसपेशीमा पनि समावेश छ। यसलाई त्यहाँ आफ्नो वजन संग काम छ कि महत्त्वपूर्ण छ, र यो चोट को जोखिम lowers।
नयाँ परिणाम हासिल गर्न र आफ्नो शक्ति पुस-अप को एक पुरा सिस्टम आवश्यक वृद्धि गर्न। के तपाईं संलग्न गरिने तपाईंको आफ्नै कार्यक्रम सिर्जना गर्न आवश्यक छ। यो एक दिन धेरै पटक 10 मिनेट गर्न व्यायाम दिन उचित छ। बिहान र साँझ - तर व्यस्त मान्छे पर्याप्त पुस-अप दुई पटक एक दिन हुनेछ। तपाईं आफ्नो कार्यक्रम गर्न सक्दैनन् भने माथि, तपाईं यसलाई इन्टरनेटमा डाउनलोड गर्न सक्छन्।
सबै को पहिलो प्रणाली तपाईं छाती, बाइसेप, triceps र काँध जस्तै यी मांसपेशी समूह तालिम गर्न अनुमति दिन्छ धक्का। साथै, त्यहाँ मा प्रभाव छ फिर्ता, को मांसपेशिहरु खुट्टा र भुँडी।
वृद्धि भार संग, अन्यथा तपाईं परिणाम संग fraught छ कि थकान प्राप्त गर्न सक्छन्, होसियार हुनु। तपाईं पनि हृदय रोग ग्रस्त गर्ने शारीरिक गतिविधि व्यक्तिहरूलाई प्राप्त गर्न सक्दैन। दबाव मा slightest वृद्धि भएको जीव मा एक हानिकारक प्रभाव हुन सक्छ।
यो जटिल छ सिद्ध pushups सबै मांसपेशी समूहहरु पंप हुनेछ, जो तपाईं ध्यान गर्नुपर्छ गर्न मात्र बिन्दु उपकरण को प्रदर्शन हो। को चाक पनि उच्च उठाएको छैन, त्यसैले भन्ने र पछाडि arched तपाईँको फिर्ता, सीधा राख्न प्रयास गर्नुहोस्। राय भुइँमा आराम गर्नुपर्छ। सजिलै तल प्राप्त र 1-2 सेकेन्ड द्वारा ढिलाइ, र त्यसपछि यसको मूल स्थिति फर्कन सक्नुहुन्छ। नाक वा छाती को टिप संग तल्ला स्पर्श गर्ने प्रयास गर्नुहोस्।
तपाईं पुस-अप धेरै नजिकिंदै द्वारा एक दिन 4-5 पटक गर्न सक्नुहुन्छ भने सबै भन्दा राम्रो विकल्प हुनेछ। सबै भन्दा राम्रो प्रकाश लोड सुरु हुने, पुनरावृत्तिकोसङ्ख्या संख्या अधिकतम सम्भव लगभग 20% भन्दा कम हुनुपर्छ। पुस सिस्टम विभिन्न प्रकारका समावेश गर्नुपर्छ। तपाईं एक विस्तृत, संकीर्ण पकड, पूर्ण पाम, औंलाहरु र खोक्रो संग पुस-अप गर्न छन्। अर्को, धक्का तरिकाहरू विचार गर्नुहोस्।
पुस-अप, पहिलो नजर मा जस्तो सरल पर्याप्त व्यायाम गर्न धेरै तरिकाहरू छन् तापनि। पूर्ण पाम मा धक्का-अप - ती साधारण। प्रविधी एकदम फरक छैन, तपाईं मात्र पूर्ण हात भर र व्यायाम सुरु गर्न आवश्यक छ।
बढी परिष्कृत संस्करण हुनेछ आफ्नो खोक्रो धक्का। यो व्यायाम तपाईं एक ब्रश विकास गर्न मद्दत र कानुनी शट (झगडे मा सहायता) गर्नेछन्।
थप आफ्नो औंलाहरु मा धक्का-अप छन्। यो प्रविधी मात्र अनुभव खेलाडीहरूलाई उपलब्ध छ। पहिलो समय व्यायाम पीडादायी हुनेछ, तर अन्ततः तपाईं प्रयोग प्राप्त। औंलाहरुमा Pushups आफ्नो खुट्टा बलियो र यो लोच दिनेछु।
मुख्य कुरा परिणाम प्राप्त छ, तपाईं एक प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाउन र ठीक यसलाई पालना गर्न आवश्यक छ। यसलाई पुस-अप पूर्ण सिस्टम अवलोकन महत्त्वपूर्ण छ। सरल व्यायाम संलग्न गर्न थाल्छन्। तपाईं थप अनुभव हासिल गर्दा, तपाईं थप परिष्कृत पुस-अप गर्न सक्दैन।
मांसपेशी oscillation, सार र महत्त्व लागि कार्यक्रम
दुबला मांसपेशी प्राप्त लागि खेल पोषण को सेट। मांसपेशिहरु सेट लागि के खेल पोषण राम्रो छ?
को triceps लागि अभ्यास कसरी चयन गर्न
पुस-अप को प्रकार
सुन्दर र releny प्रेस भुँडी। कसरी सिर्जना गर्न?
सहानुभूति भावनात्मक जलाउताबाट जोगाउँछ?
घरमा जनावरहरूको Euthanasia। जनावरहरूको दयालु euthanasia
कोको स्वास्थ्य लाभ
सिनेमा "उत्साही" - केवल एउटा चलचित्र थिएटर, एक सिनेमा जटिल
ओडेसा पोर्ट प्लांट OJSC: इतिहास, उत्पादन, निजीकरण
औसत ज्याला को गणना र यसको सुविधाहरू अक्रूअल
वर्ण जीवन अनौठो छ: Maks Kolfild, Hloya प्रार्थना, Viktoriya Cheyz, नातान प्रेस्कट
महिला रूसी राष्ट्रिय पोशाक - राष्ट्रिय छवि को एक प्रतीक।
पहाडी को प्रजनन - यो उपयोगी र रमाइलो छ
परमेश्वरले "Hodegetria" को आमा को स्मोलेन्स्क प्रतिमा: इतिहास, महत्त्व। को भर्जिन "Hodegetria" को प्रतिमा कहाँ छ